10 choses que les femmes font au lit et que les hommes détestent – SANTE PLUS MAG – TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO » 10 choses que les femmes font au lit et que les hommes détestent – SANTE PLUS MAG
10 waxyaallaha dumarka sariirta iyo ragga way necbaan - CAALTH PLUS MAG
Welcome / Psycho & Galmada / galmada / Dhaqannada galmada /
Posted on: 22 Maarso 2019
Dhibaatooyinka inta lagu jiro jacaylku maaha mid dhif ah. Xaqiiqdii, lamaane badani waxay dejiyaan nidaam joogta ah oo ka soo horjeeda dhammaystirka galmada iyaga oo aan ogeyn. Marka ay timaaddo waxyaabahan ciriiriga ah ee dhacaya waqtiyada xasaasiga ah, Tracey Cox, saxafiga iyo qoraaga kuwa ugu fiican ee ku saabsan galmada, waxay sharraxayaan asxaabteena Daily Mail in ay jiraan waxyaabo 10 ah oo ay haweenku sariirta ku sameeyaan iyo in nimanku necbaan!
Raggu waxay u arkaan in ay tixgeliyaan arrimo badan oo ku saabsan waqtiyada ay la wadaagaan qaaligooda iyo hindisadooda. Hase yeeshee, dumarku waxay u muuqdaan inay ka baxayaan caqabadan Inta badan, waxay ku biiraan orgasmarka labka ah isla markaasna aan ka fekereyno faahfaahinta yar ee cabsigeliya lamaanahooda. Sida laga soo xigtay Tracey Cox, halkan waa tallaabooyin badan oo dumarka ah oo leh hadiyad ay ku carqaladeesaan saygooda:
Si aad u dhallaanka noloshooda galmada, dumar badan bixiyaan lammaanahooda arkaysid film ah kula beera ubaxa. qabsado oo kaliya waa in ay aakhirka Mushrikiin danaha lammaanahooda si hawl in naftooda ay la soo jeediyey la'aanta ah ee dareenka daqiiqad this saaxiib, taas oo hubi inaad ka cadhaysiin xaaskaaga.
Inkasta oo nacasku jilicsan yahay dabeecadaada, waxay si sahlan ugu riixi karaan inay su'aalaan farxaddaada dhabta ah marka ay noqdaan kuwo la buunbuuniyay. Dhinaca kale, qaylo-dhaan aad u qaylo leh ayaa si sahlan u heli kara jidka, gaar ahaan haddii dadka kale ay awoodaan inay ku maqlaan.
Inta badan loo yaqaan "dayax-gacmeedka", jagadani jiifka sariirta oo u ogolaato in ninka oo dhan uu shaqeeyo dhamaantiis waa dilaa dhab ah oo jacayl ah. Run ahaantii, tus isaga in joogitaankaaga joogitaankaagu uu ku filan yahay inuu soo jiido, taasna waa mid liddi ku ah.
Nadaafad la'aanta maaha kaliya dhibaatada lammaanahaaga; waa mida qalafsan. Xaqiiqdii, haweeney u tagta musqusha iyada oo aan la dhaqin kahor intaysan tegin ficil galmo waxay xaqiijin kartaa in xaaskeyga uu qaboobi doono.
Feering ciddiyahaaga dhabarka ayaa laga yaabaa inuu u muuqdo jinsi iyo sharaf leh, laakiin ogow in wax kasta oo aad ku sameyn kartid iyada oo loo marayo habdhaqankan waa in uu ku dhibo! Xaqiiqdii, ficilkan aynu badanaa ku aragno filimada si uu u calaamadiyo xishoodka xiriirka ayaa ka fog inuu keeno natiijo isku mid ah nolosha dhabta ah.
Inta badan ee aad qarisid, niyadjabaad badanaa saaxiibkaaga ayaa abuura. Xusuuso in nin aad jecel yahay uu aqbalo dhammaan khaladaadka kugu dhibaateeya adiga iyo inta badan, uusan xitaa u arkin iyaga. Haddii uu kuu sheego in uu kuu arko qurux badan, aqbal aqbalitaankiisa oo naso!
Raaxo, raaxo iyo qancin, booska adeegayaashii waa lambarka 1 lambarka caadiga ah ee la rakibay. Haddii aad rabto in xaaskaaga / seygaaga aanad caajisneyn, isbeddel ku samee raaxada, iskuna day inaad naftaada u jihaysato boos cusub!
Waxay noqon kartaa mid madaxbannaan in la moodo in hal qof uu awood u leeyahay inuu xukumo jirka kale. Hase yeeshee, marka la eego jinsi, dumarku mararka qaar waxay isu haystaan ​​rush ama si lid ku ah, inay joojiyaan asxaabtooda sida ay rabaan. Tani waxay sababi kartaa xannibaad ka dhex dhaca ninku wuxuuna ku dareen dareen walaac ah wakhtiga uu rabo in uu ahaado carnal iyo xoriyad.
Kuma filna in uun uun diyaar u ahaado dibad baxyo ama dhacdooyin gaar ah. Ninka, wax walbaa wuxuu fiiriyaa oo uu arkaa xaaskiisa isaga oo ku dhajinaya maalmo 7 on 7 maaha habka ugu wanaagsan ee lagu farxo. Dhab ahaantii, waa muhiim in uu arko in saaxiibkiisa uu isku dayayo dadaal adag; waa caddayn in ay doonayso inay ka farxiso.
Dhammaan galmada oo dhan waa inay ahaataa waayo-aragnimo wacan dadka labadaba. Run ahaantii, ficilkan quruxda badani waa mid isweydaarsan oo aan ku salaysnayn naxariis leh in haweenku siiso ninka. Dareemku waa inuu tagaa labada siyaabood, khatarta ah in la burburiyo kalsoonida iyo jacaylka labadaba.
10 Waxyaabaha Dumarka Ah Ha Loo Yeelin Jacaylka iyo Raggu Necbaan - MAGAALADA CAAFIMAADKA
Talo: Dooxada qubeyska oo dhan oo isa soo taagaya ... - Dhallin & Mashiinka